Handray an-tanana ny raharaha ny prezidansa ? : nafindra aty Antananarivo avokoa ireo voarohirohy niisa 27 | NewsMada
Handray an-tanana ny raharaha ny prezidansa ? : nafindra aty Antananarivo avokoa ireo voarohirohy niisa 27
Taitra sy gaga ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny rehetra ao Toamasina : ny mpitandro filaminana, ny avy ao amin’ny fitsarana sy ny fonja… Tampoka tamin’izy ireo ny nahatongavan’ny ekipa mafonja avy ao amin’ny prezidansa avy aty Antananarivo, notarihin’ny mpanolotsain’ny filoham-pirenena iray, niaraka tamin’ny andiana mpitandro filaminana misahana ny fiambenana ny fiadidiana ny Repoblika, notarihin’ny lehibeny, ny talen’ny fiarovana ao amin’ny prezidansa. Tsy nisy alaharo alaharo fa nitsofoka avy hatrany tao amin’ny fonjan’Ambalatavoahangy ny fiara (bus) fotsifotsy iray tsara ambin’ny mpitandro filaminana avy ao amin’ny prezidansa. Noraofina sy nafatratra tao avokoa ireo rehetra voarohirohy amin’ity « Raharaha kidnapping Annie sy Arnaud » ity. Rehefa izany, tokony ho tamin’ny 1 ora antoandro teo ho eo, dia nihazo an’Antananarivo ny kortezy narahin’ny fiara feno mpitandro filaminana (avy ao amin’ny prezidansa) nirongo fiadiana. Na ny tonian’ny mpampanoa lalàna (procureur de la République) ao amin’ny fitsarana Ambaratonga voalohany ao Toamasina, izay tompon’andraikitra voalohany, tokony hanome amin’izao baiko famindrana (ordre de transfert) izao aza, araka ny fantatra, tsy nampahafantarina izany.
Tsy fantatra mazava ny antony
Hatreto aloha, tsy nisy ny fanazavana ofisialy ny anton’izao famindran-toerana amin’ireto olona voarohirohy rehetra ireto. Na izany aza, heverina ho fanatsarana ny tohin’ny fizotry ny famotorana sy ny fanadihadiana, ahazoana mikaroka ny tena atidohan’izao raharaha izao. Na koa fiarovana ny ain’ireo voarohirohy amin’izao raharaha izao ? Nandeha mantsy ny feo amin’ny hoe mety hisian’ny fitsaram-bahoaka.
Ho an’ny olon-tsotra vory maro nahita ny zava-nitranga teo anoloan’ny fonja kosa, hafa ny heviny : « mety tsy fahatokisana ny fitsarana eto Toamasina ». Nisy tamin’ireo sasany manan-kavana voatazona tamin’ity raharaha ity kosa no naneho ny alahelony tamin’ny mpanao gazety : « ataonay akory ny fikarakarana ny havanay any lavitra any. Izahay izao mihevitra fa havoaka ny havanay satria efa voasambotra ireo naka an-keriny an’i Annie sy Arnaud… ». Ho hita eo ny tohin’izao raharaha izao.
Nahatratra 27 mianadahy ireo voarohirohy sy nofonjaina vonjimaika tao amin’ny fonjan’Ambalatavoahangy, mikasika ity raharaha ity hatramin’izao. Ny 21 amin’ireo efa naiditra am-ponja vonjimaika, raha mbola eo andalam-pamotorana eny amin’ny polisy kosa ny 6. Amin’ireo olona 27 ireo ihany, vehivavy ny 6, mpiasam-panjakana ny 7 izay mitsinjara ho toa izao : polisy 2, mpirakidraharaha ao amin’ny fitsarana efa misotro ronono iray, mpandraharahan’ny fonja iray, mpiasan’ny ladoany iray, mpiasan’ny fitantanam-bolam-panjakana misotro ronono iray, miaramila teo aloha iray, ary mpandraharaha sy olon-tsotra kosa ny ambiny.